လိင်ဂိမ်း၏မျိုးဆက်သစ်၏ဂုဏ်အသရေကိုလည်းသင်၏စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်အပေါ်လာမယ့်ဖြစ်ပါတယ်။ အန်းဒရွိုက်ကိရိယာ၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုသင်အသုံးပြုစေခြင်းငှါ,နေသမျှကာလပတ်လုံးကတက်-နေ့စွဲဘရောက်ဇာကိုပြေးနိုင်သကဲ့သို့,သင်တို့သည်ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းကစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဆန္ဒအမျိုးမျိုးအတွက်အမာခံဂိမ်းများရှိသည်။ သင်တစ်ဦးရည်းစားအတွေ့အကြုံလိင်အစည်းအဝေးကိုခံစားချင်လျှင်သို့မဟုတ်သင်အရှိဆုံးရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ဒိုမီနိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်နေပါစေ,သင်ဒီမှာရှိသည်လိင်ဂိမ်းများစုဆောင်းခြင်း၌ပြုနိုင်ပါလိမ့်မည်။, သငျသညျနှစ်ပေါင်းအတိတ်စုံတွဲအတွက်တီထွင်ခဲ့ကြကြောင်းလိင်ဂိမ်းကစားဖူးဘူးဆိုရင်အပြန်အလှန်ညစ်ညမ်းဒီစာကြည့်တိုက်ကျိန်းသေသင်အထင်ကြီးလိမ့်မည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းလိင်ပြွန်သွားရုံသင့်ရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖျော်ဖြေရေးစောင့်ကြည့်အကြောင်းကိုမေ့လျော့ဖို့စတင်ပါလိမ့်မည်သေချာပါတယ်။ သင်က၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ကြောင့်သင်စိတ်ကူးယဉ်ထွက်ကစားနေသည်မည်သို့ထိန်းချုပ်မှုကိုငါပေးမည်,သောကွောငျ့ပါပဲ။
ဆိုက်၏နာမကိုအမှီပြောပါတယ်အဖြစ်၊အခမဲ့လိင်ဂိမ်းအပေါ်သင်ဘာမှမများအတွက်ပေးဆောင်ဖို့မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ က်ေနာ္တို႔ကေပးစရာမလိုဘူးလို႔ေျပာတာလည္းက်ေနာ္တို႔ ဧည့္သည္ေတြရဲ႕ အားသာခ်က္ပဲ။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောအားဖြင့်လမ်းမရှိပြီးသင်အသွားအလာဖလှယ်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အခြားပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ပြန်ညွှန်းမည်မဟုတ်ပါ။ ဒါ့အပြင်သင်သည်လည်းအများအပြားကြော်ငြာတွေကိုမြင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အဲဒီမှာအချို့နဖူးစည်းစာတမ်းတွေရှိပါတယ်,သွားအမှုအရာစောင့်ရှောက်ရန်,ဒါပေမယ့်ကြော်ငြာတွေသင့်ရဲ့ဂိမ်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မည်မဟုတ်. ဤဆိုဒ်ပေါ်ရှိအရာအားလုံးသည်ကန့်သတ်ချက်များကိုကျော်ပြီးသင်နှစ်သက်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။, ကမ်ဘာပျေါတှငျကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗတ္တိဇံ,ယနေ့ည!
ဒီဆိုက္ကိုဖန္တီးလိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ဘယ္သူမဆိုကစားစရာတစ္ခုခုနဲ႔ သူတို႔ကိုႏွိပ္ကြပ္ဖို႔၊ႏွိပ္ကြပ္ဖို႔ တစ္ခုခုရွာႏိုင္ဖို႔ေနရာတစ္ခုျဖစ္ခ်င္ၾကပါတယ္။ ဤသည်နှစ်ဦးစလုံးလိင်အပေါင်းတို့နှင့်ဖှယျစိတ်ကူးယဉ်ဘို့ဂိမ်းတွေနဲ့လာရန်တစ်ခုတည်းသောဆိုဒ်များတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ကစက်မှုလုပ်ငန်းအများဆုံးထုတ်လုပ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖြောင့်ယောက်ျားဂိမ်းအများဆုံးမြောက်မြားစွာရှိပါတယ်။ သငျသညျထိုကဲ့သို့သောကိုယ်ဝန်လိင်,ခြေကစား,ဒါမှမဟုတ်အချုပ်အနှောင်နှင့်လွှမ်းမိုးမှုအဖြစ်မျိုးကိုခံစားရလိမ့်မယ်,ဤဂိမ်းများတွင်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အနာပျောက်နိုင်လိမ့်မည်။ ပြီးတော့အေးခဲနေတဲ့ထဲကအဲလ်ဆာလိုဇာတ်ကောင်တွေ၊ချစ်စရာကလေးလေးတွေ၊ရုပ်ရှင်တွေထဲကကလေးလေးတွေအများကြီးနဲ့တွဲရိုက်နိုင်တဲ့ရုပ်ပြောင်ဂိမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်။
သငျသညျနောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုနေသောအများအပြားမင်းသမီးတဦးဆိုရင်,ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့ရှိသည်ဂိမ်းများစုဆောင်းခြင်းထိုကဲ့သို့သောလိမ်လည်စိတ်ကူးယဉ်နှင့်သုံးမျိုး,ဂိုဏ်းပေါက်ကွဲသံစွန့်စားနှင့်ပင်မုဒိမ်းမှုအခန်းကဏ္ဍအလိုဆန္ဒများကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ ငါတို့သည်လည်းသငျသညျအမြိုးသမီးမြား၏ခံစားဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏သောလိင်တူချစ်သူလိင်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည့်အတွက်ဂိမ်းများရှိသည်။ ကျနော်တို့တောင်မှဒီမှာစုံတွဲများများအတွက်လိင်ဂိမ်းရှိသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်၏ကွီးမွတျအပိုင်းမှာတော့သင်ယခုအချိန်တွင်၏အပူဆုံးလိင်တူချစ်သူဂိမ်းအချို့ကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ဤဂိမ်းအချို့ကိုသင်ဇာတ်ကောင်ရှုပ်ထွေးပြီးတစ်ဦးအပြန်အလှန်အင်ဂျင်မှလက်တွေ့ကျကျကျေးဇူးတင်စကားခံစားရသောအတွက်ချိန်းတွေ့ခြင်းမှတဆင့်တစ်ဦးပြည့်စုံဂျြောဂြီယနျလိင်ဘဝ၏အာရုံကိုငါပေးမည်။ ငါတို့သည်လည်းအစစ်အမှန်ကမ်ဘာပျေါတှငျတညျဆောကျသောသူအပေါင်းတို့သည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်ဒရာမာနှင့်အတူလာကြလိမ့်မည်သည့်အစစ်အမှန်ကမ်ဘာပျေါတှငျလိင်တူချစ်သူဂိမ်းများရှိသည်။ ပြီးတော့မင်းမှာညစ်ညမ်းတဲ့ဂိမ်းတွေရှိတယ်၊ရှောင်းကျန့်ကမင်းအတွက်ဒါမှမဟုတ်မင်းကသူတို့ကိုလူတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်တခြားလူတစ်ယောက်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်တယ်။, ဂိမ်းအချို့သည်စီဒီမိန်းကလေးအရေးယူမှုအပေါ်ရှမ်းနှင့်လာသည်။
ဒီစုဆောင်းမှု၏ဂုဏ်အသရေကိုသင်သာမီလီလီတာ5 ဂိမ်းများရဆိုတဲ့အချက်ကိုမှအဓိကအားထား။ ညစ်ညမ်းဂိမ်း၏ဤမျိုးဆက်သစ်ဤမျှလောက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်တိုးတက်မှုနှင့်အတူကြွလာ။ ဒီဆိုဒ်ကိုအခမဲ့လိင်ဂိမ်းကီလိုဟုခေါ်သည်သည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်အားလုံးဂိမ်းအဆင်ပြေအောင်နှင့်အန်းဒရွိုက်ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ဂိမ်းကစားဘို့စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်ဟူသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာဂိမ်းရှာဖွေခြင်းနှင့်စုံတွဲတစ်တွဲမိနစ်ကစားခြင်းထက်ပိုဆိုးဘာမှမရှိဘူးပဲသင်တို့အပေါ်မှာပျက်ကျရှိသည်။ ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်။ အရာအားလုံးအမှတ်ပေါ်ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်အပေါငျးတို့သဂိမ်းများကိုစစ်ဆေးနေမယ့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည်,ဒါပေမယ့်လည်းအပတ်တိုင်းစုဆောင်းမှုအသစ်တွေထည့်သွင်းခြင်း။